Systemd 245 inosvika ine hombe runyorwa rweshanduko uye aya ndiwo anonyanya kuzivikanwa | Linux Vakapindwa muropa
Systemd 245 inosvika iine hombe runyorwa rweshanduko uye aya ndiwo akakurumbira
Vagadziri vari kutarisira systemd yakaburitsa kuburitswa kweshanduro nyowani ye systemd 245 iyo inouya nerunyorwa rukuru rweshanduko iyo inosanganisira imwe inonakidza nhau.
Mune vhezheni itsva, nyowani systemd-homed uye systemd-distribu zvinowedzerwa, Rutsigiro rweanotakurika mushandisi profiles muJSON fomati inosanganisirwa, kugona kutsanangura nzvimbo dzemazita mu-systemd-journald kunopihwa, rutsigiro rwe "pidfd" michina inowedzerwa.
Chii chitsva musystemd 245?
Imwe yeshanduko dzakakosha kuwedzera kwebasa systemd-homed, chii pInopa inotakurika imba dhairekitori manejimendi inopihwa muchimiro cheyakaiswa mufananidzo faira mune iyo data yakavharidzirwa.
Yakagadziriswa-homed inobvumira kuumba nharaunda dzakazvimiririra yemushandisi data iyo inogona kutamisirwa pakati pesisitimu dzakasiyana pasina kunetseka nezve nguva yezviratidzo uye kuvanzika. Zviratidzo zvevashandisi zvakasungirirwa kudhairekitori repamba, kwete iyo system yekugadziriswa.
Imwe shanduko yakakosha ndeye kuwedzera iyo yekuwedzera-pane chinhu systemd-userdb, , que dudzira UNIX / glibc NSS maakaunzi kuJSON zvinyorwa uye inopa yakabatana Varlink API yekubvunza uye kunyora zvinyorwa.
Iyo JSON mbiri inosangana neyekumba dhairekitori cine ma parameter anodiwa kuti mushandisi ashande, kusanganisira zita reruzivo, password hashes, encryption makiyi, makota uye zviwanikwa zvinopihwa
Kune rimwe divi futi iyo nyowani yekushandisa "systemd-distribu" inosimbiswa, inova diseña kugovera matafura dhisiki muGPT fomati.
Naizvozvi, chimiro chemupanda chinotsanangurwa zvine mutsindo kuburikidza nemafaira ayo anotsanangura kuti ndezvipi zvikamu zvinofanirwa kunge zvisipo.
Mukuita, systemd-distribu inogona kubatsira pamifananidzo yeiyo inoshanda sisitimu iyo pakutanga inogona kununurwa nenzira shoma uye mushure mekutanga kwekutanga inowedzera kune saizi yeiyo iripo block kifaa kana kuwedzeredzwa nemamwe ekuwedzera.
Mukuwedzera mu systemd 245 izvozvi zvave kukwanisa kumhanya akawanda zviitiko zve systemd-journald, imwe neimwe inochengeta zvinyorwa munzvimbo yayo yezita. Pamusoro peiyo main systemd-journald.service, iyo .service dhairekitori inopa template yekugadzira zvimwe zviitiko zvakabatana nenzvimbo dzemazita avo uchishandisa rairo re "LogNamespace".
Systemd-udevd uye zvimwe zvinhu ne systemd wedzera rutsigiro rwe mashandiro e ipa mamwe mazita kunetiweki maficha, kubvumira mazita akawanda kuti ashandiswe panguva imwe chete kune chinongedzo.
Zita racho rinogona kusvika pamakumi matanhatu nematanhatu mavara (kare zita remumbure reneti raigumira kune mavara gumi nematanhatu). Nokusingaperi, systemd-udevd ikozvino inopa kune yega yega network interface ese mazita akasarudzika akagadzirwa neanotsigirwa ekupa mazita zvirongwa.
Maitiro aya anogona kushandurwa kuburikidza neNew AlternativeName uye AlternativeNamesPolicy marongero mune .link mafaera. Systemd-nspawn inoshandisa imwe zita chizvarwa ine izere zita remidziyo yezvisungo zvevheti zvakagadzirwa kudivi reMubati.
Kugumisira asi kusiri kupedzisira, Izvo zvinomirawo pachena mune systemd 245 chiziviso icho chakawedzerwa tsigiro yeLinux kernel subsystem "pidfd" muAPI sd-event.h kubata PID yekushandisa zvakare mamiriro (pidfd ajoina yakatarwa maitiro uye haichinje, nepo PID inogona kusunga kune imwe nzira mushure mekupedza izvozvi maitiro anoenderana neiyi PID).
Zvese systemd zvikamu, kunze kwePID 1, zvinoshandurwa kuti zvishandise pidfds kana iyo yazvino subsystem inotsigira ino subsystem.
Systemd-logind kuburikidza nePoliceKit inopa yekuwana kutonga kweiyo chaiyo terminal switch switch. Nokusingaperi, mvumo yekushandura chinoshanda chinopihwa chete kune vashandisi avo vakapinda mukati meiyo virtual terminal kamwe chete.
Kurerutsa kugadzira initrd mifananidzo ine systemd, PID 1 controller ikozvino inoona kana ichishandiswa initrd, mune iyo mamiriro iyo inongotakura initrd.target pachinzvimbo che default.target.
Kana iwe uchida kuziva iyo yakazara runyorwa yeshanduko uye nhau dzakaunzwa mukuburitswa kutsva kwe systemd 245, unogona kuzvitarisa Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Systemd 245 inosvika iine hombe runyorwa rweshanduko uye aya ndiwo akakurumbira
Ndiri kufarira linuxadictos.com, yakazara amd, zvakanaka zvakafanana cmd, asi kuda kwangu uye kudzidza kwakazara, ndine maVM makumi maviri nemaviri, gumi eHACK, 22 yezvidzidzo uye bvunzo uye matanhatu emagirafu uye mavara mukusimudzira, nemidziyo yangu yandaifarira Geany, Eclipse 10/6, Sublimetext6.com, ,
Saludos Hacklat hacker latino ,luchando mas de 12 años Español Latinoamericano para la CiberNet Mundial.-
Pindura kuna Hacklat
systemd inoyamwa !!
Kushushikana kutsva kwakawanikwa muIntel processors uye hakugone kugadziriswa
Sandcastle, chirongwa chekuisa Android neLinux pane Apple zvishandiso